? => FeCl2 (iron(ii) chloride) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = FeCl2 | Isu dheellitirka Kiimikada
? = birta (ii) koloriin
Natiijooyinka 40 helay
koloriin koloriin bir (ii) koloriin biyaha carbon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + H2O + CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee FeCO3 () ay kaga falceliso HCl (hydrogen chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo H2O (biyaha) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Dhacdada ka dib FeCO3 () waxay la falgashaa HCl (hydrogen chloride)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Hcl (hydrogen chloride), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + H2O + CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta FeCO3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeCO3 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCO3 () falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada FeCl2 (iron(ii) chloride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee FeCl2 (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Hcl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S
koloriin koloriin Diiron trisulfide; Ferid sulfide; Birta (III) sulfide bir (ii) koloriin hydrogen sulfide baaruud
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S
Waa maxay xaalada falcelinta ee HCl
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo H2S (hydrogen sulfide) iyo S (sulfur)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa Fe2S3 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga S (baaruud), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Fe2S3 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron (III) sulfide), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Fe2S3 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Fe2S3 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe2S3 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeCl2 (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee H2S (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee S (Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh S (sulfur) badeecad ahaan?
Fe2(NA4)3 + 2SnCl2 → FeCl2 + FESO4 + 2SnSO4
koloriin xasaasi ah bir (ii) koloriin Tin (II) sulfate; Salfanoon aan caadi ahayn; Daasadda Sulfuric acid (II)
1 2 1 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe2(NA4)3 + 2SnCl2 → FeCl2 + FESO4 + 2SnSO4
Waa maxay xaalada falcelinta Fe2(SO4)3 () ay kaga falceliso SnCl2 (chloride stannous)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa FeCl2 (iron (ii) chloride) iyo FeSO4 () iyo SnSO4 (Tin (II) sulfate; Stannous sulfate; Sulfuric acid tin (II) cusbo)?
Dhacdada ka dib Fe2(SO4)3 () waxay la falgashaa SnCl2 (chloride stannous)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga SnSO4 (Tin (II) sulfate; Stannous sulfate; Sulfuric acid tin (II) salt), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda SnCl2 (chloride stannous), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe2(NA4)3 + 2SnCl2 → FeCl2 + FESO4 + 2SnSO4
Su'aalaha la xidhiidha falceliska SnCl2 (koloriin adag)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee SnCl2 (chloride stannous)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SnCl2 (chloride stannous) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee FeCl2 (chloride stannous)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta FeSO4 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee FeSO4 (chloride stannous)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeSO4 () badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta SnSO4 (Tin (II) sulfate; Stannous sulfate; Sulfuric acid tin (II) cusbo)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee SnSO4 (chloride stannous)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SnSO4 (Tin (II) sulfate; Stannous sulfate; Sulfuric acid tin (II) cusbo
6HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H2
koloriin koloriin Triiron monocarbide; Carbide Triiron; Cementite; Carbide bir (Fe3C); Fe3C kaarboonka bir (ii) koloriin hydrogen
(đậm đặc) (↓ Qurux) (kh)
6 1 1 3 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H2
Waa maxay xaalada falcelinta HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa Fe3C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C)
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa C (kaarboon) iyo FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo H2 (hydrogen)?
Dhacdada ka dib HCl (hydrogen chloride) waxay la falgashaa Fe3C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Fe3C (Triiron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide birta (Fe3C); Fe3C), oo la waayayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Fe3C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Fe3C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C) Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe3C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C) ka falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta C (kaarboon)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee C (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C) Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh C (kaarboon) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee FeCl2 (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C) Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (Triron monocarbide; Triiron carbide; Cementite; Carbide Iron (Fe)3C); Fe3C) Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Na2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2NaCl + S
sulfide sodium koloriin bir ah bir (ii) koloriin chloride sodium baaruud
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2NaCl + S
Waa maxay xaalada falcelinta ee Na2S (sodium sulfide) ay kaga falceliso FeCl3 (kloriinta birta)?
How reactions can happened and produce FeCl2 (iron(ii) chloride) and NaCl (sodium chloride) and S (sulfur) ?
Dhacdada ka dib Na2S (sodium sulfide) waxay la falgashaa FeCl3 (kloriinta birta)
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda FeCl3 (birta chloride), oo baaba'aysa
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2NaCl + S
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na2S (sodium sulfide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na2S (sodium sulfide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2S (sodium sulfide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee FeCl2 (kloriinta birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl2 (iron(ii) chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NaCl (koloriinta birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee S (kloriinta birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh S (sulfur) badeecad ahaan?